News – Yezin Agricultural University | Official Website
July 21, 2020ByYee Phyo MonNews
Young Scientist Association of YAU (YSAY) is one of the independent associations of Alumni which are complementing the mother institute in academic and social activities. In 14th July 2011, YSAY was established and composed of YAU junior staff (assistant lecturers and demonstrators) and senior students (post-graduate level) of interest, which was for research purpose together...
July 2, 2020ByYee Phyo MonNews
June 23, 2020ByYee Phyo MonNews
Year 2004 remarks the 80th Anniversary of YAU in vibrant colors. The university raisedaRuby Jubilee hall which serves asamulti-purpose venue both for the students and staff. Hillside guesthouse opened in commemoration of the jubilee is well equipped with modern facilities for visitors and former professors who came back for annual reunion....
June 10, 2020ByWonna AungNews
June 10, 2020ByYee Phyo MonNews
Quality Seed Production (YAU, KMSS and MGI) on Rice စပါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့် ထုတ်လုပ်ရာတွင် စပါးတစ်နှံလျှင် တတန်းပျိုးချပုံကို တောင်သူများအား သရုပ်ပြရှင်းလင်းခြင်းစပါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့် ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စပါးအနှံလိုက်ပျိုးချသည့် ပုံစံကို တောင်သူများမှ လေ့ကျင့်ခြင်းတောင်သူများအား အရွက်အရောင်တိုင်း ကဒ်ကို အသုံးပြု၍ စပါးခင်းတွင် မြေဩဇာလိုအပ်မှု ရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်ရန် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း Participatory Varietal Selection ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ JICA၊ UNDP နှင့် တောင်သူများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အရည်အသွေးကောင်း မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်း တောင်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ စပါးမျိုးများရွေးချယ်ခြင်းရွှေဘိုမြို့နယ် တဂဏာန်းကျေးရွာတွင် အပင်ကြီးထွားစဉ်အဆင့်၌ တောင်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ စပါးမျိုးရွေးချယ်ခြင်းရွှေဘိုမြို့နယ် တဂဏာန်းကျေးရွာတွင် အပင်ကြီးထွားစဉ်အဆင့်၌ တောင်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ စပါးမျိုးရွေးချယ်ခြင်းရွှေဘိုမြို့နယ် တဂဏာန်းကျေးရွာတွင် အပင်ကြီးထွားစဉ်အဆင့်၌ တောင်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ စပါးမျိုးရွေးချယ်ခြင်းရွှေဘိုမြို့နယ်...